नुन, चिनीदेखि फूटबल जर्सी र गितारको तारसम्मका सुक्ष्म तस्विरहरु
32325 पटक पढिएको
के हो माइक्रोस्कोप (सुक्ष्मदर्शक यन्त्र ) ?
सामान्य माइक्रोस्कोप (सुक्ष्मदर्शक यन्त्र ) प्रकृतिका सुक्ष्म चीजहरु वा जीवहरु हेर्नको लागि प्रयोग हुन्छ । यसमा दुई वटा लेन्स हुन्छन् । प्रकाश र यी लेन्सको सहाराबाट सुक्ष्म चीजहरु जुम गरेर हेर्न सकिन्छ । सुनचाँदीका गहनाका सुन्दर र मिहीन डिजाइन तयार पार्नेदेखि लिएर माटोमा के के सुक्ष्म जीवहरु छन् भनेर अध्धयन गर्न पनि भूगर्भशास्त्रीहरु यसको प्रयोग गर्छन् । विश्वभरिका स्कुलदेखि कलेजसम्म मानव शरीरका कोषहरुदेखि सुक्ष्म जीवहरुको अध्धयन गर्न यस्ता यन्त्र प्रयोग गरिन्छ । तस्विरमा माइक्रोस्कोप :
के हो त इलेक्ट्रोन माइक्रोस्कोप ?
इलेक्ट्रोन माइक्रोस्कोपमा सामान्य माइक्रोस्कोपमा जस्तो लेन्सको प्रयोग हुँदैन । यसमा तीव्र गतिमा इलेक्ट्रोनको किरण पठाइन्छ । सामान्य माइक्रोस्कोपभन्दा यसको रिजोलुसन क्षमता निकै उच्च हुन्छ । सुक्ष्म चीजहरु लाखौंदेखि करोडौं गुणासम्म जुम गरेर यसको सहाराले अध्धयन गर्न सकिन्छ । हेरौं तस्विरमा इलेक्ट्रोन माइक्रोस्कोप :
आँखाले हेर्दा धेरै कुराहरु हामीलाई सामान्य लाग्न सक्छन् । तर इलेक्ट्रोन माइक्रोस्कोपबाट हेर्दा ती सामान्य कुरा पनि अद्भुत र सुन्दर देखिन्छन् । अब हेरौं केही वस्तुहरु इलेक्ट्रोन माइक्रोस्कोपबाट कस्ता देखिन्छन् !
१. नुन र मरिच :
सामान्य तस्विरमा :
इलेक्ट्रोन माइक्रोस्कोपबाट :
२. सियो र रातो कटनको धागो :
३. ब्रश :
४.एक प्रकारको उपियाँ :
५. चिनी :
इलेक्ट्रोन माइक्रोस्कोपबाट (प्रशोधित र अप्रशोधित चिनी) :
७.धुलो, कसिंगर :
इलेक्ट्रोन माइक्रोस्कोपबाट (२ करोड २० लाख गुणा जुम गर्दा ) :
८. मानिसको परेला:
९. फूटबल जर्सी :
१०. टाँका लगाएको घाउ: